I-AS-CS1 isebenzisa eyona uyilo oluyolisayo yomsebenzisi kunye nekomityi eyahlukeneyo yobukhulu obu-8 ukunyanga yonke indawo yomzimba, kwanendawo ye-chin. Intloko ye-silicone yeglasi ethambileyo ekhethekileyo yenza ukuba ukuthambisa kukhululeke kakhulu ngexesha lonyango. Indawo yoqhakamshelwano yokuphola ehlaziyiweyo ukuya ku-360 ° unxibelelwano olupheleleyo, indawo engaphezulu inokuba unyango ngaphakathi kwiseshini e-1. Ukusebenza okuphezulu, ukusebenziseka lula, kunye netekhnoloji yokusika-inikezela nge-ROI eyomeleleyo kutyalo-mali lokususa amafutha.
Uxinzelelo lwezinto ezipholileyo
I-Cryolipolysis ye-shockwave i-shock wave cellulite crioshock umatshini njenge-cs3 +